Roob cas cas muxuu ka samaysan yahay? | Saadaasha Shabakadda
Ifafaalaha maanta ee saadaasha hawada waa shaki la’aan mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan dunida oo dhan. Taasina waa, Miyaad qiyaasi kartaa inaad ku dhex socoto magaaladaada, oo si lama filaan ah roobku wuxuu u bilaabmayaa inuu dhaco ... casaan?
Roob cas ayaa lagu arkay dhowr filim oo khiyaaliga sayniska ah, xitaa waxaa la dhahaa markii ay dhacdo waa sababta oo ah Qiyaamaha ayaa imanaya ama waa dhiigga ilaahay. Laakiin, Runti maxay tahay
In kasta oo ay tahay dhacdo aad u layaab badan oo dhacda marar dhif ah, haddana Hindiya way istcimaalaan (illaa inta qofku ula qabsan karo dhacdadan) in, tan iyo 1896, roobka casaanka ahi wuu ka yaabiyaa. Gobolka Kerala sanadkii 2001 ka sokow inay awoodaan inay arkaan roobka cas ee aan caadiga ahayn, waxay sidoo kale awood u yeesheen inay ku raaxaystaan ​​daawashada arag roob jaale, madow iyo cagaar ah cirka ka soo dhaca.
Si kastaba ha noqotee, ma ahayn ilaa roobkii casaanka ahaa ee da'ay 2006 in ifafaalahaan la bilaabay in la barto, taas oo, markii la arkay dhawr dhibic oo roobkan ah oo lagu dhex arkay mikroskoobka, saynisyahannadu waxay arki karaan unugyo ... oo ka imaan kara meel ka mid ah Caalamka . Runtii, waxaa lagu xaman jiray inay noqon karaan unugyo ka baxsan dunida. Waxyaabaha ay Dowladda Hindiya beenisay tan iyo markii ay u mahadcelisay daraasado kale oo la xiriiray roobab midabyo kale leh, waxay awoodeen inay ogaadaan in xaaladahaas ay ahaayeen kudka algae oo lagu kala firdhiyey jawiga. Laakiin… Taasi ma noqon kartaa sharaxaad sababta mararka qaarkood roobku u casaan ahaa?
Sannadkii 2010-kii, cilmi-baarayaashu taas way garteen unugyada ka yimid roobka cas ee ay ku arkeen mikroskoobka ma lahayn wax calaamado DNA ah, laakiin waxay muujiyeen astaamo ka baxsan dabeecada, taasi waa, waxay awoodaan inay ku noolaadaan xaalado aad u daran. Xitaa waxaa lagu ciyaari karaa heerkul ah 121 digrii.
Cajiib run ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay roob cas?
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones-ka ee dhanka saadaasha hawada